Sucuudiga oo qoorta ka jaray saddex askari | Berberanews.com
Home WARARKA Sucuudiga oo qoorta ka jaray saddex askari
RIYADH-(Berberanews)-Sacuudi Carabiya ayaa xukun dil ah ugu fulisay saddex askari oo lagu edeeyay inay la jireen cadow aan la sheegin “khiyaano qaran”, waxaa sidaas sheegtay wasaaradda gaashaandhigga.
Saddexda askari ayaa waxaa lagu helay “dambi ah khiyaano qaran oo weyn iyo la shaqeynta cadowga, taasi oo halis gelineysa boqortooyada iyo danaheeda militari,” sida lagu sheegay bayaanka wasaaradda oo ay baahisay wakaaladda wararka Sacuudiga ee Saudi Press Agency.
War-saxaafadeedka ayaa magacyada saddexda askari ku sheegay Mohammed bin Ahmed, Shaher bin Issa iyo Hamoud bin Ibrahim – ayada oo aan la shaacin cidda ay tahay cadowga ay la shaqeeyeen.
Sacuudi Carabiya ayaa Iran u aragtay cadowgeeda koowaad ee gobolka, halka Xuutiyiinta Yemen ee Iran ay taageerto loo arko inay halis weyn oo amni ku yihiin boqortooyada.
War-saxaafadeedka wasaaradda ee lagu shaaciyey dilka saddexda askari ayaa ah mid naadir ah, iyada oo boqortooyada lagu yaqaan inay si weyn u qariso arrimaha ciidamada.
“Xaqiiqda ah in magacyada marxuumiinta la shaaciyey waxay ka dhigan in Sacuudiyiinta ay u arkaan dambiyada lagu tuhmay kuwo aad u darran, sidaas darteedna ay u mudan tahay in ciqaabtooda laga dhigo tusaale,” waxaa sidaas yidho David Des Roches, oo ka tirsan Xarunta Daraasaadka Istaraatiijiyadda Aasiyada Dhow iyo Koonfurta Asia ee fadhiggeedu yahay Washington.
Dilkan ayaa yimid ayada oo ololaha militari ee Sacuudiga uu hoggaaminayo uu kasii xoogeystay dalka deriska ah ee Yemen, islamarkaana dhaxal-suge Mohammed bin Salman uu xajistay awoodda.
Previous articlePuntland oo 14 Maxbuus budhcad badeeda ku wareejisay Somalia
Next articleKooxo hubaysan oo muqdisho ku toogtay sarkaal boolis